လူပု သရုပ်ဆောင် ဗာနေထရွိုင်းယား ကွယ်လွန် - Yangon Media Group
လူပု သရုပ်ဆောင် ဗာနေထရွိုင်းယား ကွယ်လွန်
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဧပြီ ၂၃
အရပ် နှစ်ပေရှစ်လက်မသာရှိသော လူပုသရုပ်ဆောင် ဗာ နေထရွိုင်းယား အသက်(၄၉)နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၂၃ ရက် Contactmusic သတင်းကဆိုသည်။ Austin Powers ရုပ်ရှင်ဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့သော မင်းသား ဗာနေထရွိုင်းယား ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏လူမှုမီဒီ ယာ စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်သူများက ကြေညာချက်ထုတ် ပြန်သည်။
”ဗာနေသည် တစ်ဖက်သားကို ကြင်နာဂရုစိုက်သူဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးကို ပြုံးပျော်စေလိုသူ ဖြစ်သည်။ အားလုံးကို တတ်အားသရွေ့ ကူညီလိုသူဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား ချို့တဲ့သေးသိမ်သော်လည်း လောကတွင် နေရာတစ်နေရာရရှိနိုင်ကြောင်း၊ အောင်မြင်သူ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လမ်းပြခဲ့သူဖြစ်သည်”ဟု ကြေညာချက တွင် ဖော်ပြထားသည်။
”သူ၏ ပြင်းပြသောစိတ်ဓာတ်၊ ကြိုးစားမှုနှင့် သန္နိဋ္ဌာန်တို့သည် ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းမှ လူများကို စိတ်အားတက်ကြွစေခဲ့သည်။ ဘဝတွင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကာ နေထိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်”ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ ”ဗာနေသည်တိုက်ပွဲများကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ကာ အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအခါတွင် သေမင်းကို လက် လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ရသည်”ဟု ကြေညာချက်၏အဆုံးတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သေဆုံးချိန်တွင် မိသားစုဝင်များအနားတွင်ရှိခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ကြရန် ပရိသတ်များကို အေမီရှူးမား အကြံပေး
ရန်ကုန်တွင် အငှားအိမ်ရာ ထပ်မံဆောက်လုပ်ရန် ကျပ် ၅ ဘီလီယံ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ထပ်မံခွင့်ပြုပေ?
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း အလုပ်သမား သပိတ် ကိုးရက်ကျော်သည်အထိ ပြေလည်မှု မရရှိသေး
သက်ငယ်မုဒိမ်း သေဒဏ်ပေးရေး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြည်သူ့လက်မှတ် ငါးသောင်းကျော် ရရှိပြ?
၁၄ ရာသီဆက် လာလီဂါတွင် ဂိုးသွင်းနိုင်သော ပထမဆုံးနောက်ခံလူ ရာမို့စ်ဖြစ်လာ